100 उद्धरणहरू प्रत्येक कलाकार सुन्न आवश्यक छ क्रिएटिव अनलाइन
कसलाई कहिल्यै प्रेरणाको तत्काल खुराकको आवश्यकता छैन? कला को संसार एक अस्थिर संसार हो। आज तपाईले प्रेरणाले छोएको महसुस गर्नुहुन्छ र भोली तपाई आफैंलाई एक दयनीय विचारबिना ब्लक भएको पाउनुहुन्छ। आज तपाईंसँग धेरै प्रोजेक्टहरू छन् जुन तपाईंको जीवनलाई ध्वस्त पार्छ, र भोली तपाईंले कुनै वित्तिय स्रोत फेला पार्नुहुने छैन।
यी सबैको लागि, एक कलाकार हुनुको लागि एक असामान्य आध्यात्मिक धन आवश्यक छ, हाम्रो आत्मा तिर्न हाम्रो सर्वोत्तम दिन महत्त्वपूर्ण छ, के तपाईंलाई लाग्दैन? हामी एउटा विश्वमा प्रभुत्व जमाउँछौं (उनीहरू भन्छन्) सबै प्रकार र रंगहरूको आर्थिक संकटले (आर्थिक, अस्तित्वगत, प्रेरणादायक ...), तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो डर सिर्जना गर्न सिकाउँछन् जुन रचनात्मकता र स्वतन्त्रताको सबैभन्दा खराब शत्रु हो। तपाईंको परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि त्यो याद गर्नुहोस् हीरा धेरै दबावमा बनाइन्छ। (आज म दार्शनिक हुँ, किन झूट)।
मेरो सुझाव छ कि तपाईंले उद्धरणहरू राख्नुहुनेछ जुन तपाईंको कार्यस्थलमा तपाईंलाई सबैभन्दा उत्प्रेरणा दिन्छ। यहाँ केहि छन् जसले मेरो ध्यान खिचेको छ, उनीहरुको आनन्द लिनुहोस्!
म्यानहट्टनदेखि हलिउडको रेलमा मिकी माउस मेरो दिमागबाट बाहिर निस्केकी थिई, त्यस समयमा मेरो भाइ रोइको कम्पनी र मेरो सबै समय कम थियो र आपतकाल कुनाको वरिपरि थियो।
आराम गर्न निन्द्रा, स्वप्न को लागी निदाउन। किनकि सपनाहरू पूरा हुनुपर्दछ।
एक व्यक्तिले सकेसम्म चाँडो आफ्ना लक्ष्यहरू तय गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई आफ्नो सबै उर्जा र प्रतिभा समर्पित गर्न आवश्यक छ।
म लगानीकर्ताहरूलाई डिज्नेल्यान्ड व्यवहार्य छ भनेर कहिल्यै पक्का गर्न सक्षम भएन, किनकि सपनाको ग्यारेन्टी भने कम नै छ।
डिज्नील्याण्ड कहिल्यै समाप्त हुँदैन। यो कल्पनाको रूपमा लामो सम्म बढ्नेछ। वाल्ट DISNEY
जब म सानो थिए मेरी आमाले मलाई यसो भन्नुभयो: यदि तपाईं सिपाही बन्नुहुन्छ भने तपाईं सामान्य बन्नुहुनेछ; यदि तपाईं पुजारी बन्नुहुन्छ, तपाईं पापा पुग्नुहुनेछ। म चित्रकार हुन चाहान्थे र म पिकासो पुगेको छु।
तर याद गर्नुहोस्, तपाईको जीवन भरमा साथ दिने एक व्यक्ति तपाईं नै हुनुहुन्छ। जीवित रहनुहोस्, तपाइँ जे गर्नुहुन्छ!
पुनर्जागरण चित्रकारहरू जस्तो चित्रकारीले मलाई केहि बर्ष लगायो, बच्चाहरू जस्तो चित्रले मलाई जीवनभर लिन्छ।
एक कलाकार प्रतिलिपि, एक महान कलाकार चोरी।
रचनात्मकताको मुख्य दुश्मन राम्रो स्वाद हो।
कला भनेको झूट हो जसले हामीलाई सत्यको नजिक ल्याउँछ। पब्लो पिकासो
न त एक उदात्त बुद्धिमत्ता, न ठूलो कल्पना, न त दुई चीजहरू एकसाथ बौद्धिक श्रृंगार गर्छन्; प्रेम, त्यो प्रतिभाको आत्मा हो।
यो के हो भनेर धेरै नै, के हो सानोको लागि वोल्फगंग अमेडियस मोजार्ट।
भीख माग्नुको सट्टा कारवाही गर्नुहोस्। महिमा वा इनामको कुनै आशा संग आफूलाई बलि दिनुहोस्! यदि तपाईं चमत्कारहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, पहिले गर्नुहोस्। त्यसो भएमा तपाईंको अनौठो भाग्य पूरा गर्न सकिन्छ।
मलाई थाहा छ श्रेष्ठताको प्रतीक नै दया हो।
प्रतिभाव हो भनेर अवरोधहरू: «तपाईं यहाँबाट जानुहुन्न yet अझै उठाइएको छैन।
जीनियस दुई प्रतिशत प्रतिभा र १ ety अब्बे प्रतिशत लगनशील अनुप्रयोगको मिलेर बनेको छ।
घाँटीले समातेर म भाग्यलाई लिन्छु। यसले मलाई हावी गर्ने छैन। लुडविग भ्यान BEETOVOVEN
त्यहाँ तर्क भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ: यो कल्पना हो।
उनीहरूलाई रमाईलो दिनुहोस्, उनीहरूले पाएको खुशी उनीहरूले फेरि सपना देखेपछि।
एक मान्छे कल्पना गर्नुहोस् घर मा तपाइँको मनपर्ने सोफा मा बसेर। तल विस्फोट गर्न तयार बम छ। उसले यसलाई बेवास्ता गर्दछ, तर जनताले यो जान्दछ। यो सस्पेंस हो।
टेलिभिजनले यसको स्रोतमा अपराध फिर्ता गरेको छ।
सिनेमाको लागि मेरो प्रेम मेरो नैतिकता भन्दा ठूलो छ।
राम्रो नाटक जीवन जस्तै हो, तर बोरिंग भागहरू बिना। अल्फ्रेड हिचकक
एक व्यक्तिको पागलपन अर्को व्यक्तिको वास्तविकता हो।
बीटलजुइस मेरो सबै चलचित्रहरू मध्ये एक मात्र हो जसले मलाई सारा संसारमा चुर्लुम्मै डुब्ने अनुभूति गरायो! जनतालाई केहि प्रकारका चीजहरूको आवश्यक पर्दैन; म आफूले चाहेको जे गर्न सक्थें र त्यो महान् थियो।
अवश्य, जब म बच्चा थिए मसँग कोही पनि खेल्न चाहँदैनथे। र अब म मेरो चलचित्रको साथ आउँछु। टिम बर्टन
दिमाग प्यारासुटको जस्तो छ ... यसले मात्र काम गर्दछ यदि हामीसँग खुला छ भने।
सबै चीज जति सक्दो सरल बनाउनुपर्दछ, तर बढि होइन।
रचनात्मकताको रहस्यले तपाइँका श्रोतहरू लुकाउने तरिका थाहा पाउँदैछ।
सबै विज्ञान दैनिक सोच को परिष्कृत गर्नु भन्दा अरु केहि छैन।
महत्त्वपूर्ण कुरा केरकार गर्न रोक्नु होईन।
पागलपनले एउटै कुरा गरिरहेको छ र पटक पटक फरक नतीजाहरूको आशामा।
तपाईंले पहिले खेलको नियमहरू सिक्नुपर्दछ, र त्यसपछि अरू कसैको भन्दा राम्रो खेल्नुहोस्।
त्यहाँ स्टीम, बिजुली, र आणविक ऊर्जा भन्दा बढी एक प्रेरक शक्ति छ: इच्छा। एल्बर्ट ईन्स्टिन
हामी बाँच्नको लागि धेरै समय खर्च गर्दछौं, तर यसमा बाँच्नको लागि पर्याप्त समय छैन।
हामी ठूलठूला कामहरू गर्न सक्दैनौं, ठूला मायाका साथ केवल साना चीजहरू।
जीवन एक अवसर हो, यसलाई लिनुहोस्।
जीवन एक साहसिक छ, हिम्मत।
हामीले साधारण चीजहरू असाधारण प्रेमले गर्नै पर्छ।
कहिलेकाँही हामी लाग्छौं कि हामी के गर्छौं समुद्रमा एक थोपा मात्र हो, तर समुद्रले एक थोपा हराएको खण्डमा कम हुने थियो। मारिया टेरेसा डे कलकुट।
वास्तुकला प्रकाशको व्यवस्था हो; शिल्पकला प्रकाशको खेल हो।
भूमध्यसागरीय स्नान गर्ने देशका बासिन्दाहरूले अझ बढी तीव्रताका साथ सौन्दर्य महसुस गर्छन्।
प्रत्येकले परमेश्वरबाट उसलाई पाएको उपहार प्रयोग गरोस्। यो महसुस को परम सामाजिक पूर्णता हो।
त्याग बिना क्षतिपूर्ति नै आत्मको क्षीणकरण हो।
जब कुनै चीज पूर्णताको बाटोमा छ, पूर्ण रूपमा सहि नभएसम्म यो निचोल्नु पर्छ।
मौलिकताको खोजी गरिनु हुँदैन, किनकि त्यस पछि यो असाधारण हो।
जीवन एक लडाई हो। लड्न शक्ति आवश्यक छ र बल सद्गुण हो, र यो केवल आध्यात्मिक खेतीसँगै सहने छ।
भगवान को लागी महान महान आयामी तर सिद्ध छैन।
निराशा परियोजनाहरु को प्राप्ति मा लामो समय को लागि कदर गरिएको छ अवरोध बाधाहरु देखेर आउँछ।
जीवन प्रेम हो र प्रेम समर्पण हो। जब त्यहाँ दुई आत्मसमर्पण हुन्छन्, पूरैको जीवन उत्कृष्ट, अनुकरणीय हुन्छ।
यो याद राख्नु पर्छ कि कोही पनि बेकार हुँदैन, सबैले काम गर्दछन्, यद्यपि सबैको समान क्षमता हुँदैन।
प्रकृतिको महान पुस्तकबाट सबै आउँछ; पुरुष कार्यहरू पहिले नै एक मुद्रित पुस्तक हो।
कलाको हरेक काम मोहक हुनुपर्दछ र यदि, किनभने यो धेरै नै मौलिक छ, मोहको गुणस्तर हराएको छ, त्यहाँ कलाको कुनै काम छैन।
बन्द वक्र सीमा हो, रेखा अनन्त अभिव्यक्ति हो।
चीजहरू राम्रोसँग गर्नुको लागि यो आवश्यक छ: पहिलो, प्रेम, दोस्रो, प्रविधि।
कुनै चीजलाई सुन्दर मान्नको लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको यो उद्देश्यको लागि जुन उद्देश्यको थियो पूरा गर्दछ।
मेरा महान मित्रहरू मरेका छन्; मसँग कुनै परिवार, ग्राहक छैन, भाग्य छैन, वा केहि छैन। त्यसोभए म स्वयंलाई मन्दिरमा पूर्ण रूपमा दिन सक्दछु (सगरडा फिमिलिया)। एन्टोनियो गाउड
हामी यस्तो संसारमा बस्छौं जहाँ हामी प्रेम गर्न लुक्छौं, जबकि हिंसा व्यापक दिनको प्रकाशमा गरिन्छ।
तपाईं मुस्कानको पछाडि लुकाउनुहुन्छ र सुन्दर वस्त्र लगाउँदैन भन्ने कुराले फरक पार्दैन, यदि तपाईं केहि लुकाउन सक्नुहुन्न भने, यो तपाईं भित्र कसरी सडेको छ।
जब तपाईं महान र सुन्दर केहि गर्नुहुन्छ र कोही याद गर्दैनन्, दु: खी नहुनुहोस्। भव्य एक सुन्दर दृश्य हो र अझै धेरै दर्शक अझै सुतिरहेको छ। जन लेनन
म चित्रको वस्तुको रूपमा मेरो आफ्नै व्यक्तित्वमा रुचि राख्दिन, बरु म अन्य व्यक्तिहरू, विशेष गरी महिलाहरू, अन्य उपस्थितिहरूमा रुचि राख्छु ... म विश्वस्त छु कि एक व्यक्तिको रूपमा म विशेष चाखलाग्दो छैन।
म एक चित्रकार हुँ जो दिनहुँ बिहान देखि रात सम्म पेन्ट गर्दछु। जो कोही मेरो बारे जान्न चाहन्छ उसले मेरो चित्रलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्छ।
कला तपाईको बिचारको वरिपरि एक रेखा हो।
पर्याप्त सेन्सरशिप। म आफ्नै बाहेक अरू कुनै सहयोग लिने छैन
सबै कला कामुक छ।
म आक्रमणहरुप्रति एकदम संवेदनशील छु, तर अर्कोतर्फ, जब ग्राहकहरु आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् भने यसले मलाई असर गर्छ।
प्रत्येक युगको लागि यसको कला, यसको स्वतन्त्रताको कलाको लागि।
जब म चित्रित गर्दछु, मेरो सबैभन्दा ठूलो आनन्दको भावना भनेको जागरूकता हो जुन म सुन बनाउँदैछु। GUSTAV KLIMT
जीवन तपाईंले सास फेर्ने समयले मापन गर्दैन, तर आफ्ना सासहरू लैजाने क्षणहरू द्वारा
पैसा र सफलताले मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्दैन; तिनीहरू केवल शुरूदेखि नै त्यहाँ भएको कुरालाई बढवा दिन्छन्।
दिन बाँच्नुहोस् जस्तो कि तपाईंले आविष्कार गर्नुभयो।
धेरै व्यक्ति पैसा खर्च गर्छन् तिनीहरूले किन्नको चीज किन्दैनन् किन कि उनीहरू आफूले मन नपराउने मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न चाहँदैनन्।
मलाई थाहा छैन मेरो अभियान के हो, तर म यहाँ ठूलो कारणको लागि चाहन्छु। म बाँचेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति जस्तो देखिन्छन प्रयास गर्छु
महानता साँच्चिकै हामी सबैमा अवस्थित छ
योजना बी हुनुमा कुनै कारण छैन किनकि यसले तपाईंलाई योजना ए बाट टाढा राख्छ। विल स्मिथ
विश्व सूर्यको वरिपरि घुमाउँदैन, यो एउटा विशाल मुर्गाको वरिपरि घुम्छ। यो संसारको बारेमा हो। यो सेक्स को बारे मा छ। जो कोही पनि यसलाई महसुस गर्न चाहँदैनन् आफैलाई धोका दिइरहेछ। व्यक्तिहरू बोर लाग्छन् किनकि उनीहरूले गर्न सक्ने सबै काम गरिसकेका छन। त्यसोभए, यो मृत्युको डर मात्र हो जुन उनीहरूलाई सक्रिय पार्दछ। त्यसकारण केहि व्यक्तिले मलाई एक प्रकारको यौन प्रतीकमा परिणत गरेका छन्। मेरो लुगा लगाउने तरिका पाels्ग्रामा मृत्यु हो।
म ब्राड पिट वा एन्टोनियो बान्डेरास जस्तो कोही छैन, तर हुनसक्छ यो मेरो छविको वर्जित तत्व हो, जुन लगभग विकराल हुन्छ, जसले उनीहरूलाई आकर्षित गर्दछ। तपाई अन्तिम व्यक्ति हुनुपर्दछ जो व्यक्तिहरु प्रति आकर्षित हुनु पर्छ।
यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि एक कलाकारले तपाइँको विश्वासलाई नष्ट गर्न सक्छ, भने तपाइँको विश्वास बरु कमजोर छ। मारिलिन म्यानसन
सबै केटीहरूको लागि जो तपाईंलाई कुरूप लाग्छ किनकि तपाईं आकार शून्य हुनुहुन्न, तपाईं सुन्दर हुनुहुन्छ, समाज बदसूरत छ
हुनसक्छ ऊ मसँग बस्न सकेन किनभने ऊ आफैंलाई कसरी माया गर्ने थाहा छैन उसलाई म माया गर्छु भनेर महसुस गर्न डराएको थियो
म आशा गर्दछु कि पर्खाइले मेरा सपनाहरू पूरा गर्दैन
यदि तपाईंले आफ्नो डर हटाउनु भयो भने, तपाईंसँग तपाईंको सपनाहरू बाँच्ने बढी ठाउँ हुनेछ। मारलिन मुनरो
मेरो कला एकल प्रतिबिम्ब मा आधारित छ: म किन अरु जस्तो छैन?
मेरो कलाले मेरो जीवनलाई अर्थ दिन्छ।
प्रतीकको अर्थ प्रकृति हाम्रो आफ्नै दिमागको राज्य द्वारा विन्यास गरिएको छ।
कला रगतको मुटु हो।
म पुरुषको पठन र महिला बुन्नका साथ कुनै पनि भित्री र .्ग लगाउँदिन। म सास फेर्न, पीडित र प्रेम गर्ने व्यक्तिको जीवन रंग्न जाँदैछु।
दर्शकले चित्रकलामा के पवित्र छ भनेर सचेत हुनुपर्दछ, ताकि यसलाई चर्चको जस्तो पहिले नै पत्ता लगाइनेछ। एडवर्ड मन्च
नरभक्षी क्युटेनेसको सबैभन्दा स्पष्ट अभिव्यक्ति हो।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि उनीहरू तपाईंको बारेमा बोल्छन्, यदि राम्रो छ भने पनि।
तपाईं मलाई निष्कासित गर्न सक्नुहुन्न किनकि म अतियथार्थवाद हुँ!
कुनै पनि हिसाबले म मेक्सिकोमा फर्किने छैन। म मेरो चित्रहरु भन्दा बढी अति देश मा हुन सक्छ।
म कल्पना को स्वतन्त्रता र मानिस को आफ्नो पागलपन को अधिकार घोषणा गर्दछ।
कम से कम त्यो एक मूर्तिकला को बारे मा सोध्न सकिन्छ कि यो चाल छैन।
जो अरूलाई चासो लिन चाहन्छ उसले उत्तेजित गर्नु पर्छ।
अतियथार्थवाद विनाशकारी हो, तर यसले हाम्रो दृष्टि सीमित राख्ने कुरालाई मात्र नाश गर्दछ।
आजको युवाको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अब यो सम्बन्धित छैन। साल्भाडोर डाली।
तपाईंको हातहरूमा हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई सार्नुहोस् र तपाईंसँग भएको शक्ति महसुस गर्नुहुनेछ। कार्लोस डानियल क्रुज।
भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका यसलाई सिर्जना गर्नु हो। पीटर ड्रुकर।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » १०० उद्धरणहरू प्रत्येक कलाकारले सुन्न आवश्यक छ
म ग्राफिक डिजाइन कहाँ अध्ययन गर्छु? स्पेनमा १ best वटा उत्तम केन्द्रहरू